Shirkii wadatashiga ee DFS iyo Maamul Gobolleedyada uga socday Dhuusamareeb oo Burburay.[Video]
February 6, 2021 - Written by Editor
Dhuusamareeb:-Wasiirka Warfaafinta e Dowladda Federaalka Soomaaliya Cismaan Dubbe oo la hadlay Saxaafadda ayaa sheegay in shirkii wadatashiga ee u dhexeeyay DFS iyo Maamul goboleedyada uu bur buray isagoona sheegay in shir kale la qaban doono.
Wasiirka Warfaafinta e Dowladda Federaalka Soomaaliya Cismaan Dubbe ayaa sheegay in Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya uu u safari doono magaalada Muqdisho isagoona kulan la qaadan doona 2 aqal ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Ilo ku dhow dhow Shirka Dhuusamareeb ayaa Halgan.net u sheegaya in Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ,maamulka Jubbaland iyo Puntland ay isku afgaran waayeen in xal loo helo khilaafka ka aloosan Gobolka Gedo sidoo kale waxaa la isla fahmi waayey xubnaha doorashada ee ka imaanaya Gobollada Waqooyi.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo Puntland ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay iyaguna ka hadlaan sababta kaliftay in shirka wadatashiga ee u dhexeeyay DFS iyo Maamul goboleedyada uu burburo.
Wixii soo kordha kala soco Halgan.net
251,103 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress